INTEE IN LE'EG AYAAD KU KARINEYSAA HADHUUDHKA MASHIINKA CADAADISKA: WAQTIGA WAX LAGU KARIYO EE COBSKA, SIDA LOO SAMEEYO MASHIINKA QAFIIFKA AH IYO CUNTADA KARISKA EE GAASKA - KHUDRADDA
Mashiinka cadaadiska waa mid ka mid ah qalabka jikada ee ugu waxtarka leh ee aqal kasta oo u baahan. Iyada oo ay sabab u tahay daboolka hermetic, cadaadis kordhay ayaa la sameeyay, heerkulka gudaha heerkuna aad ayuu u sarreeyaa. Sidaa darteed, waxaad ku karsan kartaa noocyo kala duwan oo suxuunta ah marar badan dhakhso. Inta badan, waxay ku jirtaa mashiinka cadaadiska ah ee la kariyey. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad keydiso iyada nafsiyadeed, macaan iyo waqti badbaadinta karinta.
Qodobbada waxtarka leh ee cobsiyada iyo qaababka
Nafaqeeyayaal ayaa ku waantoobaya qof walba in uu isticmaalo ugu yaraan 1 koollo qoyaan maalin kasta. Tani waxay u oggolaaneysaa in ay jidhka ku darto heerkulka maalinlaha ee fitamiinada iyo asiidhyada amino.
Qalabkan soo socda ee faa'iidooyinka soo socda ee miraha waa kala duwan yihiin:
Waxyaabaha ay ka kooban tahay waxaa ku jira fitamiinada dhammaan kooxaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin PP, E, C, B. Dhuxulada waa ascorbic acid, magnesium, amino acids, birta, potassium, calcium, lysine.
Sababtoo ah isugeyntaan, hadhuudhku waxay caadi u tahay habka dheef-shiidka, muruqyada wadnaha iyo habka xididada. Jidhku wuxuu bilaabmaa inuu ka tago sunta iyo sunta oo dhan.
Haddii aad isticmaasho hadhuudh qiyaasta 50 g maalintii, waxay kuu ogolaaneysaa inaad caadi u yeelato heerka gulukooska ee dhiigga, iyada oo aanad keenin kor u kaca sonkorta.
Daqiiqada hadhuudhku wuxuu xoojiyaa dheef-shiid kiimikaadka, ka hortagga xasaasiyadda, cudurrada nidaamka dheefshiidka iyo culeyska.
Kobbinta qabsashada waxay maskaxda ka dhigtaa maskaxda, horumarisaa xasuusta, ka hortagga dhacdooyinka wadnaha iyo stroke. Waxyaabo kale ayaa caadi u ah asalka maskaxda-maskaxeed, qaababka muruqyada iyo unugyada lafaha.
Waa kuwee habsami-u-socodka doorashada?
Qoraalka. Daaweynta kulaylku waa inay doortaan miraha yar yar. Waxay karkarin karaan waxayna ku jiraan inta ugu badan ee nafaqooyinka.
Marka aad dooranaysid cobsda waxay raacaan talooyinkan:
Cowsku waa inuu noqdaa caleemo. Tani waxay ka hortagi doontaa cimilada miraha iyo in la arko haddii hadhuudh uu dhab ahaantii cusub yahay. Si loo go'aamiyo tayada hadhuudhka si ay u siiyaan doorbididda shaybaarka leh cagaar cagaaran.
Qalabka moofada ah waa inuu ku duubaa cobs oo qoyan yahay. Haddii caleemaha hadhuudhka la qallajiyey, macnaheedu waa in beergooyska la sameeyey waqti dheer. Waa lagama maarmaan in la diido nuqulada noocaas ah sida casiirku noqon doono mid aad u yar.
Waxaad qiimeyn kartaa tayada iyo ku habboonaanta miraha midigta marka la iibiyo. Riix fartaada mid ka mid ah miro, kaas oo ku yaal saldhigga koollada. Haddii uu casiirka bilaabay inuu ka soo baxo, ka dibna hadhuudhku waa caan, taas oo macnaheedu yahay inay tahay wax ku fiican cunto karinta.
Go'aami hadhuudhkii hore. Waxay leedahay buluug huruud ah oo qallalan. Waayeelka waayeelka ah, sonkorta yar ayaa jirta.
Ka hor intaan la bilaabin daaweynta kuleylka, waa muhiim in la fuliyo shaqada diyaarinta. Marka hore, hadhuudhku wuxuu u baahan yahay in la dhaqo. Waxaa fiican in aan laga saarin caleemaha iyo qallalan, maadaama ay ilaalinayaan hodanka iyo macaan ee hadhuudhka. Haddii aad rabto inaad ka saarto, waad samayn kartaa, laakiin markaa waa inaad ku riixdaa hoose ee taangiga.
Maxaad u baahantahay inaad haysatid?
Talaabada koowaad waa in la diyaariyo mashiinka karinta laftiisa. Mashiinka cadaadiska waa maaddo joogto ah oo leh daboolka hawada iyo hoos u dhaadheer. Marka, markaad dooranayso digsiga, waxaad doorbideysaa alaabada meesha ay ku yaallaan hoose iyo dhinacyo badan. Tani waxay kuu ogolaaneysaa inaad caleemaha oo dhan gasho adigoon googooynin.
Waa muhiim! Si loo ilaaliyo dhamaan sifooyinka wanaagsan ee hadhuudhka, waxaad u baahan tahay inaad ku karsatid 190-230 digrii.
Malaha Hooyooyinka qaar ayaa wali haysta qaboojiyeyaasha cadaadiska ee Soofiyeeti ee ku haboon inay samaystaan ​​hadhuudh. Way fududahay in la isticmaalo haddii aad raacdo tilmaamahan:
Ka dib markii la dhigo qaboojiyaha ee ku jira digsiga, si adag u dabool daboolka. Si arrintan loo sameeyo, u rakib si ay u iftiimiso qoorta kiiska iyada oo aan wax baddal ah. Intaa waxaa dheer, xirka amniga waa inuu ahaadaa hoostiisa, iyo dariiqyadiisa - ka hooseeya roogagga shandadaha.
Daar gacanta xakamaynta 2-2.5.
Mashiinka cadaadiska ayaa diyaar u ah hawlgalka, hadda waa lagama maarmaan in la sameeyo qalabka lagu shaqeyn karo ee lagu hagaajin karo heerkulka la doortay. Si arrintan loo sameeyo, u wareegto gawaarida si toos ah jihada lagu tilmaamayo korka gacanta.
Dheriga saar dabka iyo kuleylka illaa ay hadhuudhku dhalaan. Si loo go'aamiyo jiritaanka karkarinta waxay ka iman kartaa furitaanka qalabka casriga ee shaqeynaya oo leh dabeecad u gaar ah.
Laga bilaabo bilowga baalalka, tiri inta ay karintu qaadanayso isla markiiba yareyso xooga kuleylka. Waa in ay ahaato mid aad u hooseeya si loo hubiyo in karbuun xoog leh ku jira weelka.
Qalabkani wuxuu leeyahay shaqooyin kala duwan. Wixii muraayado badan, qaabka xidhitaanka auto-closing, kuleylaha suxuunta waa mid caadi ah, waxaana jira sidoo kale barnaamijka ku haboon "Bilaabidda Bilowga". Si aad u diyaarsato hadhuudhka, si fudud u jiifso saxanka mashiinka cadaadiska oo rakibna barnaamijka lagama maarmaanka ah.
Caawin Mashiinka cadaadiska leh ee Mulinex waxaa lagu qalabeeyaa saacad leh bandhig. Tiknoolajiyada tiknoolajiyadu waa in geedi socodka wax lagu kariyo oo dhan lagu soo bandhigo qalabka elektaroonigga elektiroonigga ah, sidaas awgeed martigaliyuhu uma baahna inuu xisaabiyo wakhtiga lagu dhameynayo cunto karinta.
Isticmaalku kuma fiicna karo mashiinka cabbirka qaboojiyaha qolka 5l iyo shaqada "manjo kuu gaar ah." Iibsashada kaaliyahan lagu kalsoon yahay ee jikada, waxaad kari kartaa kari ma aha oo keliya suxuunta ay bixiyaan barnaamijyada, laakiin sidoo kale si aad u furto talooyinkaaga kudee.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay. Qeybaha soo socda ayaa loo baahan yahay hal adeeg:
hadhuudh - 3 gogo ';
biyaha - 2 koob.
Coed diyaariyey jiifay on top of caleemaha, si fiican-dhadhansiiyo hoose ee taangiga. Ku shub biyo, sug ilaa inta uu karkarayo.
Salt uma baahna isla markiiba, haddii kale kernels ayaa noqon doona mid adag.
Qalabka "Usheega" oo shid qalabka ilaa 20 daqiiqo.
Haddii la isticmaalo mashiinka cadaadiska Soofiyeetiga ah, ka dibna ku rakib shooladda, sug ilaa inta uu kicinayo, ka dibna yareeyo dabka kaddibna isku kicin cobs ilaa 6-7 daqiiqo.
Haddii hadhuudh uusan ahayn mid cusub, ka dibna ku dar 2 tbsp biyaha inta lagu jiro habka karinta. sonkorta Isagu wuxuu cuni doonaa hilibka macaan.
Waa muhiim! Mashiinka kariyaha iyo mashiinka cadaadiska ah ayaa diiriya diirimaad, si aad u karisid hadhuudhka horay u sii daa iyo dhowr saacadood.
Sida loo adeego iyo sida loo cuno? U adeegso cobs ka wanaagsan kuleyl, sidaa daraadeed waxay yihiin kuwo aad u adag oo nadiif ah. Cun saxarada, ka dib markaad milixda ku darto oo aad ku dartid subag subag.
Iyada oo subagga
Waxyaabaha ay ka kooban tahay. Qeybaha soo socda ayaa lagama maarmaan u ah karinta:
hadhuudh - 2 cob;
Ka saar caleemaha iyo xirmooyinka timaha laga bilaabo madaxyada hadhuudhka. Si taxadar leh u maydh oo tirtir.
Ku duub kursiga godka mashiinka cadaadiska (haddii aanuu taam ahayn, ku jar qaybo dhowr ah).
Ku shub biyo si ay u gebi ahaanba dabooleyso kaabash.
Karsado hadhuudhka mashiinka cadaadiska ee 10-15 daqiiqo, haddii cobs ay yihiin kuwo da 'yar iyo da' - 30-40 daqiiqo.
Sida loo adeego iyo sida loo cuno? U adeegso hadhuudhka kulul ee kulul. Daadi milix iyo dufan leh subagga ka hor inta aadan isticmaalin.
Sidee loo kariyaa gaas?
Qeybaha soo socda ayaa lagama maarmaan u ah karinta:
hadhuudh - 3 dhegood;
subagga - dhadhanka;
Xidho caleemaha hadhuudhka, ku qoy biyo iyo u dir microwave 10-15 ilbidhiqsi.
Marka xigta, ku rid hoose ee mashiinka cadaadiska ah, sare ee jiilka barafka iyo daboolo caleemo kale.
Ku shub baaquli biyo, qabow kariyaha iyo kariyo. Muddada cunto karintu waxay ku xiran tahay isbeddelka koollada. Haddii uu yar yahay, 15-18 daqiiqo ayaa ku filan, da'diisuna waa 30-40 daqiiqadood.
Corn waa badeecad qiimo leh oo ku uruurtay ceelasha dhammaan hantida maaddooyinka dabiiciga ah ee faa'iido leh. Boggeena internetka waxaad ka heli doontaa cuntooyinka suugo macaan oo laga helo miro badan oo ka mid ah kuwa caanka ah ee caanka ah ee Polaris, Panasonic, Redmond, iyo sidoo kale barashada siyaabo kala duwan oo loo karsado siriyalka labadaba.
Maxaa kale oo aad samayn kartaa?
Isticmaal kariyaha cadaadiska, Waxaad samayn kartaa boorash caano leh oo aad u fiican. Qaybaha loo baahan yahay:
caano - 500 ml;
boodada hadhuudhka - 100 g;
sonkorta iyo milixda inay dhadhamiso;
subagga - 30 g
Ku caano caano ku rid mashiinka cadaadiska, u dir mashiinka hadhuudhka isku midka ah, ku dar milix iyo sonkor, subagga.
Dhammaan qaybaha waa isku dhafan, oo ku yaal qalabka "boorash caano". Ka dib markii la sawiray, fur daboolka oo ku dar sheyga.
Mar labaad daboolka dabool si aad u jeediso habka "kuleyl" 15 daqiiqo.
Ku darso Boorash la kariyey oo kulul.
Mashiinka cadaadiska waa qalab fudud oo wax ku ool ah. Rootiga la kariyey waxaa ku jira dhammaan alaabooyinka faa'iido leh, dhadhanka, carafo iyo carafnimada. Laakiin sidoo kale waxaa muhiim ah in si wanaagsan loo diyaariyo cobsiyada iyo doorashadooda. Cunnada ugu fiican ee mashiinka cadaadiska ah ayaa ku habboon cunitaanka hadhuudhka.